ယောကျကြားခငျြး ကွိုကျနကွေတယျလို့ သတငျးတှေ ထှကျပျေါနတေဲ့ ထူးအောငျနဲ့ ပိုငျတံခှနျ – Askstyle
ယောကျကြားခငျြး ကွိုကျနကွေတယျလို့ သတငျးတှေ ထှကျပျေါနတေဲ့ ထူးအောငျနဲ့ ပိုငျတံခှနျ
မကြာသေးမီက လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာ ထူးအောင်နဲ့ ပိုင်တံခွန်တို့ ယောက်ကျားချင်း ကြိုက်နေကြပြီဆိုပြီး ဝေဖန်မှုတွေ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်….ထူးအောင်ရော ပိုင်တံခွန်ကပါ အမျိုးသမီးပရိသတ်တွေ သဲသဲလှုပ်အားပေးကြတဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တာကြောင့် ဒီသတင်းက အမျိုးသမီးထုတွေအကြားပိုမိုလူပြောများနေတာပါ…
ဘာကြောင့် ခုလို ယောက်ကျားချင်းကြိုက်နေကြတယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်မှုတွေထွက်လာရသလဲဆိုတော့ POSH Magazine – Myanmar နဲ့ OPPO Myanmar တို့ ပထမဦးဆုံး လက်တွဲပူးပေါင်းပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ ဖက်ရှင်အသားပေး Campaign တစ်ခုအဖြစ် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. အဆိုပါ ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ ထူးအောင်နဲ့ ပိုင်တံခွန်တို့ဟာ အထင်လွဲချင်စရာကောင်းအောင် တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦး စုံတွဲတွေလို နီးနီးကပ်ကပ် ရိုက်ကူးထားတာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်….
အဆိုပါ ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီး ပရိသတ်တွေက ထူးအောင်နဲ့ ပိုင်တံခွန်တို့ ကြိုက်နေကြပြီလားဆိုပြီး ဝေဖန်သံတွေ ထွက်လာခဲ့တာပါ….
အဲဒီလို ဝေဖန်သံတွေ ထွက်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ ထူးအောင်က သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ “ကျွန်တော် ခင်ဗျားတို့ထင်သလို မဟုတ်ဘူး နော်”လို့ဆိုပြီး ပရိသတ်တွေ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်နေတာကို ပြန်လည် ဖြေရှင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်…
ထူးအောင်ရော ပိုင်တံခွန်ဟာ ယောက်ကျားပီသတဲ့ အရပ်အမောင်းနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြတာဖြစ်ပြီး နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ အရူးအမူးအားပေးခြင်းခံရသူတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ပိုင်တံခွန်ဆိုရင်လည်း မြန်မာပြည်မှာသာမက ထိုင်းနိုင်ငံမှာပါ လူကြိုက်များတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်…
ခုလို ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စရာတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာကို ထူးအောင်က ခုလိုပဲ ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်…ထူးအောင်နဲ့ ပိုင်တံခွန်ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေ ရှိရင်လည်း သူတို့နှစ်ယောက်ကို အားပေးစကားတွေ ပြောပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်..
Source : OPPO and Htoo Aung
မကွာသေးမီက လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာတှမှော ထူးအောငျနဲ့ ပိုငျတံခှနျတို့ ယောကျကြားခငျြး ကွိုကျနကွေပွီဆိုပွီး ဝဖေနျမှုတှေ ထှကျပျေါလာပါတယျ….ထူးအောငျရော ပိုငျတံခှနျကပါ အမြိုးသမီးပရိသတျတှေ သဲသဲလှုပျအားပေးကွတဲ့ သရုပျဆောငျတှဖွေဈတာကွောငျ့ ဒီသတငျးက အမြိုးသမီးထုတှအေကွားပိုမိုလူပွောမြားနတောပါ…
ဘာကွောငျ့ ခုလို ယောကျကြားခငျြးကွိုကျနကွေတယျဆိုပွီး ဝဖေနျမှုတှထှေကျလာရသလဲဆိုတော့ POSH Magazine – Myanmar နဲ့ OPPO Myanmar တို့ ပထမဦးဆုံး လကျတှဲပူးပေါငျးပွီး ဆနျးသဈတဲ့ ဖကျရှငျအသားပေး Campaign တဈခုအဖွဈ ရိုကျကူးထားတဲ့ ဓာတျပုံတှကွေောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ…. အဆိုပါ ဓာတျပုံတှထေဲမှာ ထူးအောငျနဲ့ ပိုငျတံခှနျတို့ဟာ အထငျလှဲခငျြစရာကောငျးအောငျ တဈဦးနဲ့ တဈဦး စုံတှဲတှလေို နီးနီးကပျကပျ ရိုကျကူးထားတာကွောငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ….
အဆိုပါ ဓာတျပုံလေးတှကေိုကွညျ့ပွီး ပရိသတျတှကေ ထူးအောငျနဲ့ ပိုငျတံခှနျတို့ ကွိုကျနကွေပွီလားဆိုပွီး ဝဖေနျသံတှေ ထှကျလာခဲ့တာပါ….
အဲဒီလို ဝဖေနျသံတှေ ထှကျလာတဲ့နောကျပိုငျးမှာတော့ ထူးအောငျက သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ “ကြှနျတျော ခငျဗြားတို့ထငျသလို မဟုတျဘူး နျော”လို့ဆိုပွီး ပရိသတျတှေ ထငျယောငျထငျမှား ဖွဈနတောကို ပွနျလညျ ဖွရှေငျးရေးသားခဲ့ပါတယျ…
ထူးအောငျရော ပိုငျတံခှနျဟာ ယောကျကြားပီသတဲ့ အရပျအမောငျးနဲ့ ခန်ဓာကိုယျအခြိုးအစားကို ပိုငျဆိုငျထားကွတာဖွဈပွီး နှုတျခမျးနီမလေးတှေ အရူးအမူးအားပေးခွငျးခံရသူတှပေဲ ဖွဈပါတယျ…
ပိုငျတံခှနျဆိုရငျလညျး မွနျမာပွညျမှာသာမက ထိုငျးနိုငျငံမှာပါ လူကွိုကျမြားတဲ့ သရုပျဆောငျတဈဦးဖွဈပါတယျ…
ခုလို ထငျယောငျထငျမှားဖွဈစရာတှေ ဖွဈပျေါလာတာကို ထူးအောငျက ခုလိုပဲ ပွနျလညျဖွရှေငျးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ…ထူးအောငျနဲ့ ပိုငျတံခှနျကိုခဈြတဲ့ပရိသတျကွီးတှေ ရှိရငျလညျး သူတို့နှဈယောကျကို အားပေးစကားတှေ ပွောပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော..